छबि ओझा र शिल्पा पोख्रेल झगडा: शिल्पा पोख्रेल भन्छिन फिल्मकर्मीले साथ दिएनन ! || सुनौलो नेपाल
छबि ओझा र शिल्पा पोख्रेल झगडा: शिल्पा पोख्रेल भन्छिन फिल्मकर्मीले साथ दिएनन !
निर्माता छबि ओझा र अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलबीचको विवाद उत्कर्षमा छ।उनीहरुले तीन वर्षअगाडि विवाह गरेका थिए। अहिले शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छन्।उनीहरूले तीन वर्षअगाडि विवाह गरेका थिए । अहिले शिल्पाले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेकी छिन् । यसै सन्दर्भमा एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अन्तरबार्तामा दिंदै आफ्नै क्षेत्रका फ्लिमकर्मीले आफुलाई सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी छिन् ।
मैले घरेलु हिंसाविरुद्ध बोलेँ। तर, उहाँ (छबि ओझा) ‘चोरको खुट्टा काट्’ भन्दा खुट्टा तानेजस्तो गरी बेलेर हिँडिरहनु भएको छ।छबिजीले त तपाईं उहाँसँग जानुभयो भने न्याय पाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। जानुहुन्छ जाने भन्ने कुरै हुँदैन। अहिले घटना बाहिर आएपछि उहाँ ५५ वर्षको बूढो भएँ भनेर हिँडिरहनु भएको छ। ५५ वर्षको बूढोले लभ गर्ने बेला ‘ल नानी म ५५ वर्षको बूढो, छोरी होस् तँ’ भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि।अहिले आएर सहानीभूतिका लागि किन बुढो भन्नु त्यतिबेलाचाहिँ २०–२५ वर्षको जस्तो व्यवहार किन गर्नु ।
सायद उहाँहरुलाई थाहा थिएन कि अग्नी साक्षी राखेर बिहे गरेको मितिबाटै म उहाँकी पत्नी भइसकेकी थिएँ।बिहे दर्ता गरे पनि नगरे पनि परम्परागत बिहे त गरेको हो नि। त्यही मितिलाई कानुनले मान्यता दिन्छ।तर, जहाँ मायाँ छैन, त्यहाँ सम्पत्तिले केही गर्दैन। उहाँलाई मैले लात्तीले घचेटेर नहिँडेको भए अहिले म बोलिरहेको पनि हुन्नथेँ होला। शिल्पाले आत्महत्या गरिन् भनेर समाचार आउँथ्यो होला।
कोही पनि कसैको पक्षमा बोल्नुभएको छैन। केही समयअघि स्यासेन श्रेष्ठको कुरा उठ्दा कोही कसैले बोलेनन्। हामी पनि बोल्न डरायौँ।उहाँलाई परेको बेला कसैले साथ दिएन। मलाई पनि दिएनन्। साथ दिएनन् भनेर चुप लागेर भने बस्दिनँ।
शुक्र, साउन ३, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस
रबि लामिछाने१८ दिन भित्रमा धरौटीमा रिहा ,सिधा कुरा जनतासंग कार्यक्रम ३ महिना सम्म बन्द हुने !
चितवनमा निस्कियो नाराबाजी गर्ने अर्को समुह, पुडासैनीलाई न्याय दे !
पद जान्छ भनेर म डराएको छैन, आगामी निर्वाचनपछि मलाई बस्न मन छैन: प्रधानमन्त्री ओली
भदौ १ काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने...
हड्डी फुकेर राजसंस्था आउदैन -प्रधानमन्त्री
भदौ १ काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजतन्त्र फर्काउँछौं भन्नु बेमौसमको...